Chọta Great YouTube Videos maka Kids
> Resource> YouTube> A Ndepụta nke YouTube Videos na Channels maka Kids
YouTube videos aghọwo ihe na-esiwanye ewu ewu ụdị ntụrụndụ maka afọ niile, gụnyere ụmụaka. Ke ibuotikọ emi anyị na-egosi gị ihe kasị mma YouTube videos maka ụmụaka na kwa YouTube ọwa nke ụmụaka, otú i nwere ike na-enye fun kwesịrị ha tinyere ụkpụrụ ọma.
Nkebi nke 1: Top 10 YouTube videos maka ụmụaka
Part 2: Top 5 YouTube ọwa maka ụmụaka
Lee ndepụta nke top 10 YouTube videos maka ụmụaka si n'okpuru. Ị na-ekiri vidio ebe a.
1 Kids Akụkọ: The Fantabulous Cumulo-Nimbuli mgbapụta
Nke a video bụ a mara mma akụkọ banyere a na-eto eto eyen onye nkụda mmụọ na mgbe nile mmiri na-ezo oge na ọjọọ ihu igwe, na otú ya kasị mma ndị enyi eme na-a ọkà mmụta sayensị invents a igwe inu ígwé ojii na-enyere ya aka tufuo nsogbu ya.
2 Kids Songs: Yellowberry Jam ma ọ bụ Chuck Brown
Nke a bụ a mara mma song maka ụmụaka banyere a anwansi ihendori na-eme ka ọbụna imetosi na-asọ oyi ihe oriri na-atọ ụtọ maka ụmụaka.
3 Ndị mmadụ n'ezie ka mmiri ara ehi music video
Nke a video nwere nnọọ captivating music karịsịa maka ụmụaka na song bụ zuru okè n'ihi ụmụ na-asị na-aṅụ mmiri ara ehi.
4 Tim na Space Cadets
Onye a bụ a n'ezie mara mma song nke nwa na-bụ otú mmetụta site Superman na ọ na-apụ inyere ndị mmadụ aka na nsogbu ha. Nke a song bụ obere nkume omume na-akpọ "Tim na Space Cadets".
5 The Elephant Song - Cool-awụ ọsọ n'ugwu maka Kids site Eric Herman
Nke a YouTube video nwere mma song ẹkwọ site eyen si music artist Eric Herman. Na nke a song, Eric bụrụ ihe oke itunanya mara ezigbo mma song niile banyere enyí.
6 The Jụụ Mkpụrụ Okwu (ABC) Song maka ụmụaka | DidiPop
Nke a bụ ihe na inwe-emeri song, nke ọ bụghị nanị ẹnyene kamakwa ịkụziri ụmụaka banyere mkpụrụ akwụkwọ abịchịị na ike nke ụda na n'afọ iri na ụma na a fun na-akpali ụzọ.
7 Charlie ta mkpịsị aka m - ọzọ!
Nke a video kemgbe a YouTube sensashion mgbe ọ bịara pụta. Ọ na-e-ele ihe karịrị 67 ugboro nde on YouTube onwe ya. The video bụ banyere 2 ụmụaka, eleghị anya, ụmụnna, ebe okenye onye na-agbanye mkpịsị aka ya n'ọnụ onye nta na ọkọdọ bitten.
8 Shoo ofufe achịcha rụrụ site Johnny Bregar
Nke a bụ video bụ fun maka ezinụlọ na ụmụaka. Ẹkwọ site Johnny Bregar na e dere site Guy Wood, song dabeere na kpochapụwo "Shoo ofufe achịcha".
9 Willy Ga-Smile maka igwefoto - Debbie na Enyi
Nke a video bụ a mara mma song banyere Debbie nwa nwanne Willy. Willie dị nnọọ adịghị ọchị n'ihu igwefoto na-eme ka-enweghị isi na ihu maka foto. Lee video ka ego niile ma ama ebe Willy nleta na ihe mere na ọ dịghị ọchị maka igwefoto.
10 The 5 Best akụ aka-akụ aka Jokes
Akụ aka-akụ aka njakịrị bụ mgbe niile na-ewu ewu n'etiti ụmụaka. Nke a na-egosi video 5 nke kasị mma akụ aka-akụ aka njakịrị maka ụmụaka ilekọta.
Nkebi nke 2: Top 5 YouTube ọwa maka ụmụaka
Ọ bụghị naanị ndị okenye ma ọbụna ụmụaka-enwe mmasị ikiri vidiyo na YouTube. Ya mere, anyị tọrọ ala a ndepụta nke 5 kasị mma YouTube ọwa maka ụmụaka.
Yo Gabba Gabba bụ a TV show maka ụmụaka ma ama karịsịa na America. Na ya videos na-eme a na-egbu na YouTube dị ka mma. The show bụ banyere 5 ụmụaka na-adị ndụ na ha DJ enyi Lance Rock.
# 2 Sesame Street
Nke a YouTube ọwa nwere humongous collection nke video, ihe karịrị 1500 maka ụmụaka na-enwe. Ha mkpachị na-atọ ụtọ, ụtọ, muta na Executive-ọrụ ụlọ Sesame Street videos.
Dị ka aha-atụ aro, a YouTube ọwa na-elekwasị anya fun na ụtọ ụzọ na-akụzi ma na-ịkụziri ụmụaka.
Nke a ọwa bụ zuru okè n'ebe ụmụaka na ndị nne na nna na-ezukọta na-egosi ha kasị mma na-akpa ọchị oge dị ka pranks, njakịrị, wdg
# 5 Mfe Kids Crafts
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na ụmụaka na-ekpughe na-aghụghọ na ihe echiche, ma na-amụta crafts Nkuzi, "Mfe Kids Crafts" kwesịrị gị njedebe ikpeazụ na YouTube.
YouTube Music ọwa
Kasị anya YouTube Videos
Saịtị dị ka YouTube
Download YouTube ọ bụla Format